यी हुन् चिसोमा न्यानो कपडा र बाढीका बेला खाद्यान्न बाँड्ने रिक्साचालक ! – ताजा समाचार
यी हुन् चिसोमा न्यानो कपडा र बाढीका बेला खाद्यान्न बाँड्ने रिक्साचालक !
मध्य तराईमा पातलो ज्यान भएका एक इ-रिक्साचालकको समाजसेवा सबैका लागि प्रेरणादायी बनेको छ। देशीविदेशी संघ-संस्थाबाट पाएको पैसाले मौसमी र फाइदाको समाजसेवा गर्नेहरूका लागि चन्द्रनिगहापुरका रिक्साचालकको सामाजिक काम एउटा गतिलो पाठ हुनसक्छ।
कसलाई पो रहर हुन्छ दैनिक १८ घण्टासम्म रिक्साको घुमाउँदै सडकमा भौंतारिने ! आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका चन्द्रनिगाहापुरका रिक्साचालक केदारप्रसाद तिमल्सिनालाई चिन्न उनीसँग एकपटक भेटेर मात्रै पुग्दैन।
रौतहट चन्द्रनिगाहापुर-४ का ४० वर्षीय केदारप्रसाद आफैं बि’रामी भएर ओछ्यान परे भने उनको घरको चुल्हो बल्दैन। दुःखमा बाँचिरहेका यी रिक्साचालक समाजसेवामा तल्लीन छन्। तिमल्सिनाले रिक्सा चलाएर परिवार धानेको दस वर्ष भइसकेको छ। अहिले उनी इ-रिक्सा चलाउँछन्। फरक यति हो- यही रिक्साबाटै गरिब र दिनदु:खीलाई सहयोग बाँड्छन्।
हरेक वर्ष जिल्लामा बाढी, जाडो, आगलागीबाट धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। पीडितलाई उनी सहयोग गर्न पुग्छन्। यस वर्ष तिमल्सिनाले चन्द्रपुरनिगाहपुर लगायत जिल्लाभका विभिन्न गाउँमा मुसहर, बाढीपीडित बस्ती र गाउँमा पुगेर दलित तथा अतिविपन्न छ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सर्ट, पाइन्ट, भेस्ट, कुर्ता-सुरुवाल साडी न्यानो कपडा वितरण गरेका छन्।
यसअघिका वर्षहरूमा पनि शितलहर पी’डित, बाढीपीडितहरूलाई उनले न्यानो कपडा, खाद्यान्न वितरण गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष मात्रै चिसोका कारण रौतहटमा २३ जनाले ज्या’न गु’माउनु परेकाले यो बर्ष अझ बढी न्यानो कपडा बाँडने लक्ष्य राखेको उनी बताउँछन्।
आफ्नै आँखा अगाडि शीतलहरले गाउँले मरेको देखेका तिमल्सिनाले तराईका जिल्लामा शीतलहरबाट मृत्यु हुनेहरूको कटू यथार्थ सञ्चारमाध्यमबाट पटक-पटक बाहिर ल्याए। कुनै सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले चासो नदेखाएपछि यो अभियानमा लागेको उनी आफैं बताउँछन्। फेसबुकमा ‘रौटहटमा शीतलहरका कारण जनजीवन क’ष्टकर बन्दै’ भनी स्टाटस लेखेर गरिबको लागि काम गर्न थालेको उनी बताउँछन्।
प्रकाशित भएको : January 13th, 2020